नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई मिलाएर लैजाने लक्षण नदेखाएको बताएका छन् ।
बुधवारको बैठक केही सकारात्मक भएपनि बिहीवार ओलीसँग भएको छलफलले आफूलाई निराश बनाएको नेपालले बताए ।
धनुषाको जनकपुरमा शुक्रवार कार्यकर्ताहरूसँग कुरा गर्दै नेता नेपालले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किन गरेको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरेको बताएका हुन् ।
‘अस्ति ओलीले फोन गरेर बालुवाटारमा भेटौँ भन्नुभयो, मैले बालुवाटारमा हुन्नँ भनें । त्यसपछि उहाँले बालकोट आउनुस् भन्नभुयो, म आउँदिनँ भनें । मैले तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा भनेको थिएँ, उहाँले हुन्न भन्नुभयो । त्यसपछि मैले एभरेष्ट होटलमा आउनुस् भनेपछि उहाँले मेरियटमा आउनुस् भन्नुभयो,’ भेटको प्रसंगबारे नेपालले भने, ‘द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भने दुवैलाई स्वीटेबल ठाउँ चाहिन्छ । अहिले म बालुवाटार गयो भने माधव नेपाल लुरुलुरु बालुवाटार गयो भनेर प्रचार हुने थियो ।’
नेता नेपालले बुधवारको बैठक केही सकारात्मक भएपनि बिहीवारको बैठकमा ओलीले मिल्ने लक्षण नदेखाएको बताए ।
‘अस्ति बुधवार कुराकानी भएपछि आशा जागेको थियो, हामीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हटाउने भनेको होइन पार्टीलाई व्यवस्थित ढंगले चलाउनुस् भनेका थियौं,’ ओलीसँगको भेटबारे नेपालले भने, ‘हिजो बस्नुभन्दा पहिले उहाँका प्रवचन सुनियो । बल्खुमा गरेको भाषणको लक्षणबाट देखियो, माधव नेपालको हुर्मत लिने सोच रहेछ ।’
नेता नेपालले आफूहरूलाई नबोलाई फागुन २८ गतेको बैठकबाट किन निर्णय गरेको भनेर प्रश्न गर्दा ओलीले तपाईंहरूको मोबाइल बिग्रिएको छ भन्ने जवाफ दिएको बताए ।
‘जेठ २ गते फर्किऔं, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऔं, मिलेर छलफल गरौं भन्दा उहाँले जे निर्णय भएको छ त्यहाँबाट फर्किन सम्भव छैन, तपाईंहरू किन आउनुभएन भनेर प्रश्न गर्नुभयो । मैले कहिले बोलाउनुभयो ? भन्दा उहाँले तपाईंको मोबाइल बिग्रेको थियो भन्ने कुरा गर्नुभयो । हामी ९०/९५ जनको मोबाइल बिग्रेको रहेछ,’ नेपालले भने ।
नेता नेपालले हिजोको बैठकमा ओलीले पार्टीले गरेको निर्णय स्वीकार गरेर आजको बैठकमा आउन आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
‘खाए खा नखाए घिच, माने मान नभए बाटो खुला छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो,’ नेपालले भने ।
साथै बिहीवारको बैठकमा ओलीले आफूहरूमाथि ६ महिनाका लागि गरिएको कारवाही पुनर्विचार गर्ने संकेत गरेको नेपालले सुनाए ।
‘६ महिनाको कारवाहीबारे विचार गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । जसले कोअर्डिनेशन स्थापना गर्‍यो उसलाई कारवाही ? केपी ओलीले माधव नेपाललाई सस्पेन्स गर्ने ? माधव नेपाल आन्दोलनबाट भाग्नेवाला छैन !’ नेपालले भने ।
कोभिडविरुद्ध लड्न बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक, अक्सि...
ईमेल :lokaantar[email protected]